अन्तरिक्ष यात्री बन्दै आमिर ! - Everest Dainik - News from Nepal
अन्तरिक्ष यात्री बन्दै आमिर !
२०७३, ९ फाल्गुन सोमबार
फाल्गुन ९ । बलिउड नायक आमिर खान अब चाँडै नै अन्तरिक्ष यात्री बन्ने समाचार बाहिर आएको छ ।
चलचित्र ‘दंगल’को सफलतासँगै नायक आमिर खान अब आगामी फिलिममा अन्तरिक्ष यात्रीको भूमिकामा देखिने भारतीय एक मिडियाले खुलासा गरेको हो ।
उसोत ः उनले यसअघि नै फिलिम ‘पिके’ मा कुनै अन्य ग्रहबाट आएका यात्रीको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् ।
रिपोर्टका अनुसार भारतका पहिलो अन्तरिक्ष यात्री राकेश शर्माको जीवनीमा आधारित उक्त फिल्म निर्माण हुन लागेको छ । भारतीय पहिलो अन्तरिक्ष यात्री शर्मा सन् १९८४ मा अन्तरिक्ष पुगेका थिए । उनी अन्तरिक्षमा ७ दिन २१ घण्टा र ४० मिनेट बसेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
उनले भनेका छन्, ‘८ वर्षको प्रतिक्षापछि यो क्षणमा आइपुगेका छौं । आमिर खानले मेरो भूमिका गर्दैछन् । फिल्मका अन्य कुराहरु निक्र्यौल हुन बाँकी छ ।’ शर्माले आफ्नो भूमिका आमिर खानले गर्न लागेकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
ट्याग्स: aamir khan, rakesh sharma